Waa kuma korneylka Soomaaliyeed ee lagu xukumay Mareykanka? - BBC News Somali
Waa kuma korneylka Soomaaliyeed ee lagu xukumay Mareykanka?
Xigashada Sawirka, CBC
Cornayl Tuke ayaa lagu xukumay inuu bixiyo 500,000 oo doollar oo magdhaw ah
Xeerbeegti Maraykan ah ayaa dambi ku heshay Kornayl Yusuf Cabdi Cali oo ku magac-dheer Kornayl Tuke, isaoo la sheegay inuu jirdil gaystay xilligii uu socday dagaalkii sokeeye ee Soomaaliya
Kornaylka ayaa maalmihii ugu dambeeyay taxi wade ka ahaa gobolka Virginia ee dalka Maraykank, ka hor intaan shaqadaas laga joojinin.
Xigashada Sawirka, Kornayl Tuke
Cornayl Tuke waxaa uu ka mid ahaa saraakiishii sarsare ee Soomaaliya xilligii Maxamad Siyaad Barre
Wuxuu dowladdii kacaanka ka ahaa taliyihii guutada shanaad ee milatariga Soomaaliya, waxaana lagu eedeeyay inuu mas'uul ka ahaa tacaddiyo ka dhan ah bani'aadanimada oo la sheegay in uu ka geystay goboladii waqooyi oo haatan la yirahdo Somaliland.
Xigashada Sawirka, CNN
Kornayl Tuke ayaa taksiile ka ahaa dalka Mareykanka
Xigashada Sawirka, Kornyal Tuke
Kornyal Tuke ayaa ka hawgali jiray gobolladii waqooyi
CNN ayaa warbixintii ay baahiyeen ciwaan uga dhigay waa kuma "Qofka ku qaadaya"?.
Dacwadda la xiriirta kiiskan ayaa in muddo ah soo jiitameysay sida ay shaaciyeen wargeysyada kala ah The Guardian iyo New York Times ee kasoo kala baxa dalalka Ingiriiska iyo Mareykanka.
Xiisadda u dhaxeysa Itoobiya iyo Mareykanka oo cirka isku sii shareertay
50 Daqiiqadood ka hor
Itoobiya maxay ka tiri hadalkii Trump ee qarxinta biyo-xireenka?
Markii ugu dambeysay ee la cusbooneysiiyay: 21 Juunyo 2020